उत्पादन कम्पनीले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अध्ययन गर्दै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
उत्पादन कम्पनीले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली अध्ययन गर्दै
जेठ २८, २०७५ 5056 ऊर्जा खबर/काठमाडाैं
सरकारले गठन गरेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले कर्णाली नदीमा पहिचान भएको १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशय जलविद्युत आयोजना अध्ययन गर्ने भएको छ ।
आयोजना अध्ययन गर्न कम्पनीले विद्युत विकास विभागमा अनुमतिपत्र लिन गत बैशाख २ गते आवेदन दिएको छ । यति ठूलो एउटै आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी हुन लागेको सम्भवतः यो पहिलो हो ।
अहिलेसम्म पहिचान भएकामध्ये १२ मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना ठूलो मानिन्थ्यो । अब बूढीगण्डकीभन्दा ठूलो मुगु कर्णाली भएको छ । आयोजनाले बाजुरा, हुम्ला र मुगुका साविक १७ गाविस प्रभावित हुने देखाइएको छ ।
आवेदनको मूल्यांकन भइरहेकाले केही दिनभित्रै नै कम्पनीलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र दिइने विभागले जनाएको छ । मुगु र हुम्ला कर्णाली मिसिने दोभानमा आयोजना पहिचान भएको छ ।
कम्पनीले यसअघि ४ जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको छ । ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१, ६ सय २७ मेगावाटको तल्लो अरुण, ३ सय ७ मेगावाटको जगदुल्ला र साढे ४ सय मेगावाटको किमाथांका अरुणको अनुमतिपत्र लिएको थियो ।
कम्पनीका नाममा जारी भएको भेरी–१ को अनुमतिपत्र रद्द गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चीनको विवादित कम्पनी चाइना गेजुबा ग्रुप कर्पोरेशनलाई दिएको छ । यस्तै, एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययनमा जगदुल्ला र किमाथांका अरुणको क्षमता घटबढ भएको छ ।